Sheeko Qosol Badan ay soo Qortay Zubeyda Maxamed Cali (Zuzu) Oo kamida Aqristeyaasheena.
Wednesday September 12, 2012 - 01:08:43 in Sheekooyin by Super Admin
Wali waxaynu ku jirnaa Qoraalada Shkeeyinka ay inoosoo qorayaan qaar ka mida asxaabteena ku waa aanu ugu talagalnay waqtiyada qaar in lagu madadaashado. hadaba waxaa Sheekadan Inoo soo qortay Gabarta lagu magacaabo zubeyda Maxamed cali (zuzu)Oo ku
Wali waxaynu ku jirnaa Qoraalada Shkeeyinka ay inoosoo qorayaan qaar ka mida asxaabteena ku waa aanu ugu talagalnay waqtiyada qaar in lagu madadaashado. hadaba waxaa Sheekadan Inoo soo qortay Gabarta lagu magacaabo zubeyda Maxamed cali (zuzu)Oo ku dhaqan Amerika waxana y ku bilaabatay sheekadii sidatan:
maalin ayaa wuxuu dagaal dhex maray labo wiil walaalo ah dagaalka markii hore wuxuu ahaa mid af ka hadal ah.
Arintii af kahadalka ayaa waxey isku badashay mid gacan ka hadal ah ama dagaal run ah.
Midkii yaraa dagaalka biloobay ileen nin gardaran maguuleystee darintii ay ku wada fadhiyeen ayaa markiiba si lama filaan ah looga tuuray ama la ridayba oo halkii gacanta kaga jabtay halka midkii weynaa isha muruq ka galay kkkkkkkkkkkkkkkkk
qore: zubeyda Maxamed Cali (Zuzu)
oo joogta wadanka Mareykanka (Minneapolis)